နန်းဆိုင်နွမ်| February 5, 2013 | Hits:7,285
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ဌေးဝင်း February 5, 2013 - 7:19 pm	သမ္မတရုံးက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက….MS Office word, excel. powerpoint, နဲ့ facebook သုံးတတ်ရုံနဲ့…..တိုက်ခိုက်မှုလုပ်သည့် အဖွဲ့သည် နောက်ဆုံးသတင်းများအရ အင်ဒိုနီးရှားမှ လာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း …..လူအထင်ကြီးအောင်….ဘာညာလျှောက်ပြောနေတာ….တကယ်တော့သူဘာမှမသ်ိရှာပါဘူး။